“အတွေးစလေးတွေ”: ဦးဟန်ကြည်နှင့် မြန်မာမှု . . .
Posted by Han Kyi at 3:53:00 am
အကြိုက်ချင်းတူတာတွေရော၊ မကြိုက်ချင်းတူတာတွေရော၊ အကြိုက်ချင်းမတူတာတွေရော စုံလို့ စေ့လို့ပါလား။
အကြိုက်ချင်းတူတဲ့အထဲမှာ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့ မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များ ပါလေဦးမလားလို့ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ပို့စ်ဆုံးသွားရော။ သူကြီးကတော့ မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မဃဒေ၀လင်္ကာသစ်ဆို အသဲစွဲဘဲ။ အတော်များများ အလွတ်ကျက်ဖူးတယ်။
အတည်ပေါက်ကြီးရေးတတ်တဲ့ မင်းသိင်္ခကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်စွာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ရာဇ၀င်တွေကို ဇာတ်လမ်းဆန်ဆန်ရေးတတ်တဲ့ ချစ်ဦးညိုကိုလဲ နှစ်သက်စွာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဘာဘဲ ပြောပြော မဒမ်ဟန်ကြည်နဲ့ ညှိယူပြီး အကြိုက်ချင်းဖလှယ်ကြပုံလေးကို သဘောတွေ့နေမိတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက စာစဖတ်တော့ ဒဂုန်ရွှေမြားနဲ့ စတာ... နောက်တော့ မင်းသိခ်၊ နောက်တော့မှ ပဲ ကျန်တာတွေ စဖတ်ဖြစ်တော့တယ်......
မဃဒေ၀လည်း အသည်းစွဲပဲပေါ့ သူကြီးရယ်...ဆရာဝဏ်ရဲ့ မောင်ခွေးဖို့ကဗျာများကိုလည်း အကြိုက်ပေါ့...သို့ပေမင့် ကြိုက်တာတွေသာ စာရင်းတင်ရရင် ပို့စ်မဟုတ်တော့ဘဲ မှတ်တမ်းဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ အကုန်မပြောတော့ဘဲ ခပ်ပါးပါးကလေး ပုတ်ထားတား)
ဆရာဟန်ကြည်ရဲ့ ပို့စ်ကတော့ တစ်ပုဒ်ဆိုတစ်ပုဒ်ပါပဲ.. အရေးလဲကောင်း အသိလဲကြွယ်ပါ့ ... အင်းပေါ့လေ မြင်ဆရာတွေ ဒီလောက်များနေမှတော့ ဂလောက်တော့ ရှိပေမပေါ့ (အားကျသံဖြင့်ပြောသွားသည်) .. :)
မဒမ်ဟန်ကြည်အကြောင်းလေးဖတ်ရတော့ ပြုံးမိတယ် အဖြစ်က တီတင့်တို့နဲ့တူလွန်းလို့ပါ ...
ခေတ်သီချင်းကိုသဘောကျတဲ့ တီတင့်နဲ့ဆိုင်းသံဗုံသံကိုနှစ်သက်တဲ့ခင်ပွန်းကြောင့် :P
ပြောမ ယ့်သာပြောတာ မေရှင်တို့ခေတ်က သီချင်းကိုကြိုက်တယ်ဗျ...။ ဆရာအချိန်ရရင် သီချင်းလေးဘာလေးတင်ပါဦး...။ ဟုတ်တယ် ဆရာတခါလောက်လေး ဆံပင်ဆိုးကြည့်ပါလား ရုပ်ပြောင်းသွားမလားပဲ...။ မဒမ်အတွက်ပြောတာနော်..ခိခိ...။
ဟုတ်ပါ့ တကယ်တော့ ဆြာက ငယ်ငယ်လေးရယ် ပုံကြီးက အသက်ကြိးနေတာ နုအောင်နေမှပေါ့း)
အစ်မနဲ့တွဲလိုက်တော့ ဦးနဲ့ သမီး ဖြစ်သွားကော ဒါပေမယ့် အစ်မ ဆြာ့ကို ခေါ်တာ ဘယ်လိုလဲ ကျနော်သိတယ်နော် ဒါမယ့် မပြောပြတော့ဘူး ဟိဟိ ။
အရင်တုန်းကတော့ သီချင်းကြီးတွေ မကြိုက် ခုတော့ နားထောင်နေလေရဲ့ ..ဆြာဟန် ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေလိုက်တာ ကျန်းခန်းသာလို့မာပါစး)
မှန်လိုက်တာ။ မှန်လိုက်တာလို့ သာအော်ပြီးထောက်ခံလို်က်ချင်တော့တယ်။
အုိုင်အိုရာတုို့ လည်းအကိုတွေဖတ်သမျှလိုက်ဖတ်ခဲ့တာ။ ဦးဟန်ကြည်ဖတ်သမျှ အားလုံးနီးနီးကျမအကိုစာအုပ်စင်မှာတွေ့ ရတာတွေချည့်ဘဲ။
ငါတုို့ မလည်း ဟုိုးငယ်ငယ်ကတည်းက
စာကောင်းပေကောင်းဆုိုတာအဲဒီစာရေးဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရေးတာဘဲဖတ်ခဲ့ရ ကြားခဲ့ရတာ။ ခုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးကုိုယ်တောင်ဇရာထောက်လာပြီ။ နောက်အသစ်တွေလည်းမတုိုးလာဘူး။ ဒီစာရင်းဒီစာရင်းပါဘဲလားလို့ လေ…
အခုချိန်ထိ ဖတ်ခွင့်မရရှာ သေးဘူး ဆရာရေ့
ဟိုတုန်းက သီချင်း ဂီတ များကိုတော့ နားထောင်ခွင့် ရနေပေပြီဗျာ
အဆိုတော် အနုပညာသည် လို့ကို မမြင်သေးပါဘူး
ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ ခုံပေါက်သွားကြတာ ပြုတ်ကျကုန်တော့မလား မှတ်ရတယ် ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေကြတယ်နော်...
I totally agree with you. May be we were born ion the same era luckily. I am the elder brother of Nai Pe who died2years ago. I mean whom you called Ko Gyi Kyaut or Ba Kyaut of Shwe-ya-tu hmat-term blogger. I always visit your blog but never wrote any comments. Anyway, I really like the way you compose and your presentation style. Nobody can hope to write something fluently without reading anything. Congratulations U Han Kyi. I appreciate your judgement as well. Wish you best of luck.